Daawo: Jeneraal Xuud oo Muqdisho la keenay – Sidee loogu soo dhoweeyey? | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Daawo: Jeneraal Xuud oo Muqdisho la keenay – Sidee loogu soo dhoweeyey?
Daawo: Jeneraal Xuud oo Muqdisho la keenay – Sidee loogu soo dhoweeyey?
Muqdisho (Dalkaan.com) – Jeneraal Abuukar Xaaji Warsame (Xuud) oo si weyn uga soo horjeeday HirShabelle ayaa maanta la keenay magaalada caasimada ah ee Muqdisho, isaga oo ogolaaday inuu wad-hadal toos ah la galo dowaldda federaalka ah ee Soomaaliya.
Muxuu Erdogan ka yiri rabshadaha Masjidka Al-Aqsa?
Louis Saha oo fariin adag u diray Xidiga Ronaldo ee Kooxda...
ISKALAAJI ‘wareysi xiiso leh’ hordhac!!